Umntu we-4 kwikhaya leholide kwi-STRÖMSTAD
Indawo yokuhlala eyonwabileyo ejonge ulwandle kunye nommandla wolwandle Wamkelekile kule ndawo imnandi kwaye ilungele abantwana kwindawo yokuhlala edolophini kanye ecaleni kolwandle kwilali yeeholide yaseHällestrand. Le ndawo ineendawo ezinkulu eziluhlaza kunye nenkundla yentenetya, igalufa encinci, i-volleyball, iinjongo zebhola ekhatywayo, iiboules kunye nebala lokudlala. Thatha uhambo lwakusasa uye elwandle ukuya kuqubha kusasa, emva koko utye isidlo sakusasa esimnandi kwipatio. Emva koko thatha usuku lokukhetha phakathi kokufumana ulwandle kunye nokuqubha elunxwemeni, ukuhamba ngeendlela ezisecaleni kolwandle phakathi kweenduli ezingenanto kunye namahlathi epine engaqondakaliyo, umise kwaye ujonge iziqithi zeziqithi kunye nolwandle olubanzi, amava ngeeseyile kunye nezikhephe zemoto ukusuka kuyo nayiphi na indawo. okanye ukhwele ibhasi ukuya kwidolophu yabakhenkethi yaseStrömstad ukuze ube namava okubetha kwesixeko, ukhwele iipiers okanye uhlale nje kwaye wonwabe kwisofa kwenye yeepaki zesixeko. Indlwana enendawo eselunxwemeni yolwandle ikwayindawo efanelekileyo yokuloba, i-kayaking kunye nokujonga yonke iNorthern Bohuslän. Ngepatio uya kufikelela ekungeneni nasekungeneni kwikhitshi elidityanisiweyo kunye nendawo yokuhlala, ekhitshini kukho isitovu, ioveni, imicrowave, ifriji enendawo yokukhenkceza, umenzi wekofu kwaye kwindawo yokuhlala kukho itv kunye nesofa encinci. ibhedi. Igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela zibekwe ngaphakathi kwigumbi lokuhlala. Igumbi lokulala lifakwe ibhedi ekhululekileyo ephindwe kabini kunye nebhedi enkulu. Ukusuka kwigumbi lokulala unokufikelela kwindawo yokuhlambela eneshawa. Kwipatio kukho ifenitshala yasehlotyeni kunye nebarbecue apho unokonwabela ukutya okulungileyo ngelixa uxoxa ngeziganeko zosuku. Umatshini wokuhlamba uyafumaneka kwisakhiwo esikhulu saloo ndawo. Indlu inoqhagamshelo lweWifi. E-Strömstad kukho ukhetho olukhulu lwemisebenzi, ubomi obutyebileyo bokutyela, ukuthenga okuhle kwiivenkile ezincinci ezikufutshane enye kwenye okanye kutheni ungahlali nje kwaye ujabulele zonke izikhephe kwindawo yezibuko. Thatha ibhasi ungene kumbindi wesixeko kunye nazo zonke iindawo zokuzonwabisa okanye zokuhlambela apho kukho ezininzi onokukhetha kuzo. Ukuba ufuna ukufumana amava eziqithi kunye nokusingqongileyo kweziqithi, kukho iitshathi ezininzi zesikhephe kunye nokuhamba ngesikhephe ukusuka kwizibuko elikumbindi ukuya kwiziqithi ezininzi zeziqithi ezinje ngoNyaka oMtsha. Furholmen okanye iKosteröarna, kodwa nakwiNorway engummelwane. Kuyenzeka ukuba urente isikhephe okanye i-kayak xa usenza uphononongo lwakho. Kwabo banomdla kwigalufa, kukho iikhosi ezininzi ezinemingxuma eyi-18 kwindawo kunye nokufikelela kufutshane kwinkundla yentenetya. Wamkelekile kwindawo yokuhlala engaselwandle kwindawo yaseStrömstads.
Uyilo: Ipantry(umpheki(umbane), ihood, umatshini wekofu, ioveni(mini), imicrowave, ifriji(+ freezer)),Igumbi lokuhlala/ibhedi(ibhedi enye esongwayo, TV(iziteshi zikamabonakude zaseSweden), unomathotholo), igumbi lokulala(igumbi eliphindwe kabini Ibhedi, ibhedi eyi-2x yebhedi), igumbi lokuhlambela(isitya sokuhlambela, ishawa, indlu yangasese), iterrace(10 m2)(ifanitshala yasegadini, iBBQ)